भाउ नपाएपछि टिपिएन सुन्तला | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
भाउ नपाएपछि टिपिएन सुन्तला
२०७१ पुष १६, बुधबार ०३:२१ गते
काउले । पन्ध्र पुस लाग्दा पनि चितवनको पहाडी गाविस काउलेको वडा नं. ६ मा पर्ने तल्लो काउलेका किसानले लगाएको सुन्तला बिक्री हुन सकेको छैन । भाउ राम्रो नपाएकाले गाउँलेले सुन्तला टिपेका छैनन् । माघसम्म कुरेर बस्ने सोचमा छन् गाउँलेहरु ।
‘यहीँ किन्न कोही आउँदैनन् । तल राजमार्गसम्म लैजानुपर्छ । त्यहाँ पु¥याएको गाडी भाडा प्रतिकिलो पाँच रूपैयाँ लाग्छ । सुन्तलाको मूल्य ३० रूपैयाँभन्दा पर्दैन । त्यसैले भाउ कुरेर बसेको हो’ तल्लो काउलेका सुन्तला किसान ध्वजबहादुर रानाले भने ।
एककिलो सुन्तलाको ५० देखि ६५ रूपैयाँसम्म मूल्य आउने आसमा गाउँलेहरु माघसम्म सुन्तला नटिप्ने सोचमा छन् । ‘यहाँको सुन्तला राम्रो छ, मीठो छ त्यसैले भाउको आशा त राख्नै प¥यो नि’ सुनाखरी कृषक समूहका अध्यक्षसमेत रहेका ध्वजबहादुरले भने ।
तल्लो गाउँलेमा सुन्तला लगाउने चलन १०÷१५ वर्षअघि सुरू भएको हो । व्यावसायिक रुपमा उत्पादन लिन थालेको भने तीन÷चार वर्षमात्रै भएको छ । गाउँमा २०÷२२ घर रहेका छन् । प्रायले सुन्तला खेती गरेका छन् ।
‘मेरोमा सय बोट सुन्तला छन् । राम्रो मूल्य आयो भने तीन लाख रूपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । नभए घाटा लाग्छ’ ध्वजबहादुरले भने । व्यावसायिक रुपमा सुन्तला लगाएकाले कम्तीमा एकलाख रूपैयाँसम्म आम्दानी लिन सकेको उनले बताए ।
सुकबहादुर थापा मगरले पनि डेढ सय बोट सुन्तला लगाएका छन् । सुन्तला फल्न लागेको भने धेरै भएको छैन । उनले गतवर्ष अलि धेरै सुन्तला बेचे । सुन्तला बेचेर उनले २० हजार रूपैयाँमात्रै कमाएका थिए । यो वर्ष धेरै फलेको छ । धेरै पैसा समाउने धोको अझै पूरा भएको छैन ।
‘यो वर्ष त भाउ नै आएन किन हो खै ? भाउ आए हामीलाई काम गर्न जाँगर चल्थ्यो’ सुकबहादुरले भने । तल्लो काउलेका बासिन्दाले सुन्तला बेच्न पृथ्वीराजमार्गको हुग्दी या फिस्लिङमा ल्याउँछन् । बाटो कच्ची भएकाले गाडी चले पनि भाडा महँगो छ ।
‘हामीले प्रयास गरेका छौँ । भाउ नआउँदा किसानमा निराशा छाउँछ । आए राम्रै हुने थियो’ ध्वजबहादुरले भने । सुन्तला खेतीमा गाउँले जुटे पनि सरकारी नजर खासै नपुगेको गाउँलेहरु बताउँछन् । सरकारी प्राविधिकहरु कहिले काहीँमात्रै आउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
चितवनको दारेचोक गाविसको तामिन सुन्तलाको लागि प्रख्यात छ । काउले गाविसका केही गाउँहरुमा
पनि सुन्ताला खेती फष्टाएको छ । सुन्तला खेती फस्टाए जसरी सरकारी नजर भने पर्याप्त नपुगेको स्थानीय गुनासो गर्छन् ।